के केरा र अण्डा संगै खादा मानिसको मुत्यु हुछ ? - ज्ञानविज्ञान
के केरा र अण्डा संगै खादा मानिसको मुत्यु हुछ ?
हिजोआज सोसियल मिडियामा एउटा पोष्ट भाइरल भएको छ । अण्डा र त्यसलगत्तै केरा सेवन गरिएको केही सेकेण्डमै भारतका एक व्यक्तिको मृत्यु भएपछि उक्त पोष्ट सोसियल मिडियामा एकाएक भाइरल बन्दै गएको छ ।
उक्त पोष्टलाई आधार मान्ने हो भने अण्डा र केराको मिश्रणले पेटमा गएर विषको रूप लिने गर्दछ । जसका कारण मानिसको मृत्यु समेत हुनसक्छ । त्यसैले अण्डा र केराकेा सेवन नगर्न सोसल मिडियामा सुझावको ओइलो लागेको छ ।
आखिर अण्डा र केरामा त्यस्तो के छ, जसको सेवनका कारण मानिसको मृत्यु समेत हुनसक्छ ?
अण्डा र केराका फाइदा
अण्डा तथा केरा हरेक घरमा पाइन्छन्, खाइन्छन् । विशेषगरी जीम जाने तथा शारिरिक व्यायाम गर्नेहरू माझ लोकपि्रय अण्डामा प्रोटिनको मात्रा धेरै हुन्छ भने फलफूलको रूपमा सेवन गरिने केरामा आइरन तथा कार्बोहाइड्रेटको मात्रा धेरै हुन्छ । यसबाहेक पनि अण्डा तथा केरा सेवन गर्दा थुप्रै फाइदा हुने गर्छन् ।
केरामा भरपूर मात्रामा आयरन, पोटासियम, फाइबर तथा मिनरल्स पाइन्छ । यो ग्लूकोज तथा प|mुट्रोसको पनि राम्रो स्रोत हो । आइरनले शरीरमा रगतको मात्रा बढाउन मद्दत गर्छ भने पोटासियमले रक्तसञ्चारलाई सही तरीकाले प्रवाह गर्न मद्दत गर्छ ।
केराको सेवनले ब्लड प्रेसर नियन्त्रण रहनुका साथै तनाव कम गर्न मद्दत गर्छ ।
केराले शरीरलाई रोगहरूबाट बचाउने तथा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने हुँदा केराको सेवन स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ ।
प्रोटिनको राम्रो स्रोत मानिएको अण्डामा भरपूर मात्रामा स्याचुरेटेड फ्याट, क्याल्सियम, अमिनो एसिड तथा भिटामिन ‘डी’ समेत प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ ।
यसको सेवनले शरीरको स्टामिना बढाउनुका साथै मांशसपेशीलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्दछ ।
के यी दुईको सममिश्रण शरीरका लागि घातक छ ?
चिकित्सकहरूका अनुसार केरा र अण्डा एकैसाथ खानु हुँदैन भन्ने कुनै वैज्ञानिक आधार छैन ।
तथापि विभिन्न किसिमको कीटनाशक औषधीको प्रयोग तथा केरालाई पकाउनका लागि गरिने विभिन्न औषधीको प्रयोगका कारण औषधीको डोज धेरै भएमा त्यस्ता औषधीले मानव शरीरलाई असर पार्दछ ।
व्याक्टेरिया तथा संक्रमित अण्डाको सेवनका कारण पनि शरीरमा फुड प्वाइजनिङको समस्या निम्तने गर्दछ । जसका कारण मानव शरीरमा गम्भीर समस्या निम्तेर मानिसको मृत्यु सक्ने ओम अस्पताल तथा रिसर्च सेन्टरका पोषणविद् डा. भूपाल बानियाँ बताउँछन् ।
बानियाँ भन्छन्, ‘खानेकुरा खाएकै कारण मानिसको मृत्यु हुन्छ भन्ने कुराको तर्क छैन । यद्यपि प्रत्येक मानिसको शरीर फरक हुने तथा त्यसले गर्ने काम समेत फरक हुने भएकाले कसैलाई त्यही कुराले फाइदा गर्छ भने कसैलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याउन सक्छ ।’
अण्डा तथा केरा खाएकै कारण मानिसको मृत्यु हुन्छ भन्नु सही नभएको बानियाँ बताउँछन् । उनका अनुसार कयौ मानिसलाई अण्डाको एलर्जी हुने गर्दछ । अण्डाको एलर्जी भएका व्यक्तिले अण्डाको सेवन गरेमा उनीहरूलाई चिलाउने, घाउ खटिरा तथा विविरा आउने, पेट दुख्ने तथा फुल्नेजस्ता समस्या देखा पर्न सक्छन् ।
त्यस्तै, कसैलाई ग्लूटेन मिसिएको खानेकुराको कारण एलर्जी हुनसक्छ भने कसैलाई मिल्क प्रोटिनका कारण दूधको एलर्जी हुनसक्छ ।
र, त्यही एलर्जीका कारण मानिसको मृत्यु समेत हुनसक्दछ ।
त्यसो भए अन्य कुनै खानाको मिश्रणले पनि यस्तो समस्या उत्पन्न हुनसक्छ ?
यस प्रश्नमा चिकित्सकहरू संसारमा त्यस्ता कुनै मिश्रण नभएको बताउने गर्छन् । डा. बानियाँ भन्छन्,’ मेडिकल साइन्समा यस्तो कुनै मिश्रण छैन, जसको सेवन गरेकै कारण मानिसको मृत्यु हुन्छ । यद्यपी, फिजिकल , बायोलोजीकल तथा केमिकल्स मिसावटयुक्त खानेकुराकेा सेवनका कारण भने मानिसको मृत्यु सक्ने कुरालाई भने नर्कान सकिदैन’ ।
विशेषगरी, फिजिकल मिसावट अन्तर्गत खानामा रौ, चुरा आदी मिसाएको कारण त्यसले आन्द्रामा समस्या निम्त्याउन सक्दछ । जसका कारण शरीरमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भई मानिसको मृत्यु समेत हुन सक्छ ।
त्यसैगरी, जैविक मिसावट अन्तर्गत वासी, सडेगलेका, ढुसीयुक्त तथा व्याक्टेरियायुसक्त खानेकुरा पर्दछ । केमिकल्स कन्ट्यामिनेशन अन्तर्गत विभिन्न रसायन, किटानशक औषधी तथा माछामा प्रयोग गरिने फर्मालाईन नामक औषधी भन्ने बुझिन्छ । यस्ता मिसावटको प्रयोग खानामा अधिक भएमा यसले स्वास्थ्यलाई गभीर समस्या पुर्‍याउन सक्छ ।
यस हिसाबले कुनै व्यक्तिको शरीरमा कुनै तत्वले असर पार्न त सक्दछ । तर यो कुरा सबैमा लागु नहुने भएकाले यस कुरालाई भने विशेष मनन गर्न समेत उनले अनुरोध गरेका छन् ।
Don't Miss it पानी कम हुँदा निम्तिन्छ यी १० समस्या
Up Next कुन छालालाई कस्तो रङको ड्रेस सुहाउँछ ?
गर्भावस्थामा पायल्स भए के गर्ने ? किन हुन्छ गर्भावस्थामा पायल्स ? यस्ता छन् लक्षण र उपचार बिधि
गर्भावस्थामा उच्च रत्तचाप, मधुमेह भए के गर्ने ? गर्भावस्थामा पायल्स भए के गर्ने ? धेरैजसो गर्भवतीले झेल्ने प्रश्न हो यो…
जीरा (cumin) तौल घटाउनको लागि चमत्कारिक तौल घटाउने पेय पदार्थको रुपमा लिइन्छ । विहान खाली पेटमा जीरा पानी पिउँदा मेटाबोलिज्ममा…